Tag: email ahịa roi | Martech Zone
N’oge na-adịghị anya, ezigara m nyocha ahịa ịntanetị m na otu n’ime atụmatụ ndị nwere nnukwu ụzọ bụ ahịa email. Email marketing ka nwere oke nloghachi dị elu na ntinye ego, ọnụ ala ntinye, yana ọ bụ otu n'ime teknụzụ nrụgide ole na ole fọdụrụ maka ndị ahịa iji ruo ndị debanyere aha ha ugbu a. Ahịa email na-arụ ọrụ - anyị niile maara nke ahụ mana mana ole ka akwụkwọ ozi email gị bara uru maka nzukọ gị? Understand ghọtara ihe
M mere gafee vidiyo nke Tony Robbins na Ted nke na-akpali akpali. Otu n'ime ahịrị ya mere n'ezie na mụ onwe m: Resources vesos Resourcefulness Otu n'ime ọrụ na-enye afọ ojuju m nwetụrụla bụ ịbụ Integration Consultant for ExactTarget. N'oge ahụ, ExactTarget nwere interface mmemme na-enweghị oke (API) mana ndị ahịa anyị na-eto eto na akpaaka. Kwa ụbọchị bụ nzukọ na onye ahịa nwere